WHO ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မူလဇစ်မြစ်ကို ခြေရာခံရန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့သည် တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့သို့ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်၌ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲပေပြည်နယ် ရှီကျားကျွမ်းမြို့ရှိ လူပေါင်း ၁၀.၂၅ သန်းကို ပထမအကြိမ် Nucleic acid စစ်ဆေးမှုတွင် positive ဖြစ်သူ（၃၅၄）ဦးတွေ့ ရှိ
ဟဲပေ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/မြတ်မြတ်ဦး
တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲပေပြည်နယ် ရှီကျားကျွမ်းမြို့၌ လူပေါင်း (၁၀.၂၅) သန်းကို ပထမအကြိမ် Nucleic acid စစ်ဆေးမှု ပြီးစီးခဲ့ရာတွင် positive လူနာ (၃၅၄) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဟဲပေပြည်နယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
နှင်းမုန်တိုင်းကြားမှ သူရဲကောင်းများ -- အရိုးခိုက်အောင်အေးသော ရာသီဥတုကြားမှ လိုအပ်သူများကို ကူညီပေးနေသည့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေသော လမ်းမပေါ်တွင် အခြားသူများအတွက် အစားအစာများနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို တင်ဆောင်ထားသည့် သုံးဘီးဆိုက်ကယ်တစ်စီးကို ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြင့် တအိအိ တွန်းနေကြသော ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူအုပ်စု၏ ဓာတ်ပုံများက အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး အအေးလှိုင်းဒဏ် ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် မြင်တွေ့ရသူများ၏ နှလုံးသားကို နွေးထွေးစေခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်တုန်းပြည်နယ်တွင် လူပေါင်း ၁.၂၁ သန်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီး
ကွမ်ကျိုး ၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးဌာနက ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် ၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်ရာတွင် ကွမ်တုန်းပြည်နယ်အတွင်း အဓိကလူထုများကို စည်းစနစ်ကျနစွာ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးသည့် လုပ်ငန်းအား တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် အချိန်ထိ ကွမ်တုန်းပြည်နယ်အတွင်း လူပေါင်း ၁.၂၁၀၉ သန်းကို COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် WHO နှင့် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြော
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်၏ မူလအရင်းအမြစ်ကို ခြေရာခံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်ပြီး ကောင်းမွန်သောသဘောထားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက WHO နှင့် အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ စိန်ရန်မြို့တွင် ဒုတိယအကျော့ COVID-19 စစ်ဆေးမှု စတင်
စိန်ရန်၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ ဟဲဖိန်ခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် nucleic acid စစ်ဆေးမှုနမူနာများ ရယူနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ ဟဲဖိန်ခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် ဒေသခံတစ်ဦးထံမှ nucleic acid စစ်ဆေးမှုနမူနာများ ရယူနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ Sujiatun ခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် ဒေသခံတစ်ဦးထံမှ nucleic acid စစ်ဆေးမှုနမူနာစုဆောင်းနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ Sujiatun ခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် nucleic acid စစ်ဆေးမှုခံယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ဒေသခံများကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ ယွီဟုန်ခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် nucleic acid စစ်ဆေးမှုခံယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ဒေသခံများကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ ဟွမ်ကူးခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးမှုအတွက် စုဆောင်းရယူထားသော nucleic acid စစ်ဆေးမှုနမူနာများကို သိမ်းဆည်းနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ ယွီဟုန်ခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေမှုအတွက် nucleic acid စစ်ဆေးမှုခံယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေသူများကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ ယွီဟုန်ခရိုင်တွင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေမှုအတွက် nucleic acid စစ်ဆေးမှုနမူနာများ သိမ်းဆည်းနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် စိန်ရန်မြို့၊ Tiexi ခရိုင်တွင်COVID-19 ရောဂါရှာဖွေမှုအတွက် ဒေသတစ်ဦးထံမှ nucleic acid စစ်ဆေးမှုနမူနာများ စုဆောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း စိန်ရန်မြို့တွင် ဒေသတွင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာများ တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ရှာဖွေရေးအတွက် မြို့ပြဧရိယာများ၌ လွှမ်းခြုံမှုရှိစေရန် ခရိုင် ၉ ခုရှိ ဒေသခံများအား nucleic acid စစ်ဆေးမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Shenyang conducts second round of COVID-19 screening
Source: Xinhua| 2021-01-06 10:40:57|Editor: huaxia
SHENYANG, Jan6(Xinhua) -- Northeastern Chinese city Shenyang started conducting the second round of nucleic acid tests for residents in nine districts covering most urban areas to screen for coronavirus infections following recent reports of locally transmitted confirmed COVID-19 cases.
1- Medical workers pack nucleic acid test samples collected for COVID-19 screening in Heping District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Pan Yulong)
2- A medical worker collects nucleic acid test samples for COVID-19 screening in Heping District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Pan Yulong)
3- A medical worker collects nucleic acid test samples fromaresident for COVID-19 screening in Heping District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Pan Yulong)
4- A medical worker collects nucleic acid test samples fromaresident for COVID-19 screening in Sujiatun District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Yang Qing)
5- Residents queue for nucleic acid tests for COVID-19 screening in Sujiatun District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Yang Qing)
6- Residents queue for nucleic acid tests for COVID-19 screening ataresidential area in Yuhong District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Yao Jianfeng)
7- A medical worker packs up nucleic acid test samples collected for COVID-19 screening in Huanggu District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Yao Jianfeng)
8- Residents queue for nucleic acid tests for COVID-19 screening ataresidential area in Yuhong District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Yao Jianfeng)
9- A medical worker stores nucleic acid test samples collected for COVID-19 screening ataresidential area in Yuhong District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Yao Jianfeng)
10- A medical worker collects nucleic acid test samples fromaresident for COVID-19 screening in Tiexi District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 5, 2021. (Xinhua/Yao Jianfeng) ■